Nahoana no Mampiaraka izany amin’ny chat mieritreritra ny lahatsary amin’ny chat.
Ny fomba maro ny lahatsary mpampiasa ao amin’ny chat.
Maro ny tranonkala loharanom-baovao, anisan’izany ny toy izany dia manam-pahefana ho toy ny Directory sy ny chat ny Misterin ny Vehivavy tsy voalaza afa-tsy ao Maosko, fa koa toy ny lahatsary amin’ny chat. Eny tokoa, an-tserasera ny lahatsary amin’ny chat»hangout»noho ny habeny sy ny asa, dia foana ny nitana anjara toerana eo amin’ny Fiarahana amin’ny chat. Na izany aza, tao anatin’ny taona vitsivitsy amin’ny chat room new York zavatra mandeha diso: noho maranitra latsaka ny mpanatrika, maro fotsiny dia tsy nisy intsony, sy ny sisa, miaina amin’ny fotoan-tsarotra. Saika foana ny velona amin’ny chat fantsona fihinanam-bilon’ny, chat Beijing tsy voatanisa eo ambony nitsidika lehibe, ary mihoatra na latsaka mbola patrana ihany taloha Chat.
Amin’ny ankapobeny dingana efa tsy ho voahitsakitsaka ny Misterin ny Vehivavy. Ny isan’ny mpampiasa lahatsary nahena ho ny isan’ny mpitsidika, dia ho efa ho in- latsaky ny isan’ny Muscovites. Saika nanjavona avy amin’ny voambolana chat manonona ny faritra Avtovo, Kupchino, Ohta, ary ny hafa kosa tsy isika efa nandre ny malaza indray mandeha voyages Moscow-Live chat, tamin’izany fotoana, ny fanangonana lehibe sy namana ekipa mpikambana ity tatitra manaraka ity:
Izahay dimy mamoy fo ny olona, izay tonga teny an-dàlana avy ao Maosko ny Lahatsary amin’ny chat. ny mahery fo nihaona tao amin’ny toerana be voninahitra Yasenevo, ry zalahy nifandray tanana, dia nanoroka ny ankizivavy, dia nandray anjara mavitrika, nifoka tamin’ny lasa, ary nahazo tao ny fiara,»Eny, ny Lahatsary amin’ny chat, mihazona».
Ny antony mahatonga ny toe-draharaha dia tsy fantatra.
Video ho an’ny mpampiasa, koa, dia very hevitra
Toa izany dia ny karazana rafitra. Na izany aza, tamin’ny saika na inona na inona fotoana andro zht afaka hihaona, fara fahakeliny, vitsy ny olona noho izany dia mbola mbola betsaka ny lahatsary amin’ny chat. Na dia, raha ny antontan’isa no vakiana, ny fanatrehana ny Lahatsary amin’ny chat miharihary tightened Alemaina amin’ny amin’ny mpitsidika.
Mandra-pahoviana no izany krizy heveriko fa tsy misy afaka milaza mialoha. Azontsika atao amim-pahatokiana ny milaza zavatra iray ihany: rehefa ny taloha ny lahatsary amin’ny chat Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana Misterin ny Vehivavy foana no ho faly ny ho namana avy any an-tanàna ny Neva
← Alina chat
Mitady ny zatovovavy, na ny zatovolahy iray Netphen, Avaratra Rhin-Westphalie →